Faransiiska oo wadatashi ugu yeertay Safiirkiisa dalka Turkiga. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Faransiiska oo wadatashi ugu yeertay Safiirkiisa dalka Turkiga.
Faransiiska oo wadatashi ugu yeertay Safiirkiisa dalka Turkiga.
Madaxwaynaha Turkiga Racep Dayip Erdogan oo la hadlayay xubno ka tirsan xisbigiisa AK party ayaa sheegay in madaxwaynaha faransiiska Macron uu u baahan yahay baaritaan dhanka maskaxda ah, kadib markii uu hogaamiyaha Faransiiska sheegay inuu gacan bir ah ku qabanayo Islaamiyiinta xagjirka ah ee wadankiisa, dhanka kale Madaxwaynaha Faransiiska Macron oo ka carooday hadalkaasi Ordagan ayaa wadatashi ugu yeeray safiirkiisa u fadhiya Turkiga.
Madaxweyne Macron oo ka falcelinayay dilka nin macallin ahaa oo qoorta laga jaray kadib markii uu soo bandhigay sawir uu ku suurad xumaynayay Nebi Maxamed NNKH, ayaa ku adkaystay in dalkiisa uusan joojin doonin sawirrada noocaasi ah.
Labadaan madaxwayne oo dalalkoodu ay ka tirsan yihiin gaashaanbuurta NATO ayaa isku haya arimo ay ka mid yihiin dagaalada Suuriya, Liibiya iyo Nagorno- Karabakh. Balse hadalka Erdogan ayaa ahaa mid si toos ah uu ugu weerarray shakhsiyadda Macron.
Madaxweyne Erdogan ayaa ka carooday in qaar ka mid ah dhismayaasha dowladaha hoose ee Faransiiska lagu soo bandhigay sawir gacmeedkii macallinka loo dilay, xilli xus loo samaynayay Arbacadii.
Waxa uu sidoo kale dhaliilay hadal uu Macron jeediyay ka hor dilkaasi oo ahaa in “Diinta Islaamka ay dhibaato ku tahay caalamka oo dhan.”
Muslimiinta Faransa ayaa ah kuwa ugu badan Yurub, qiyaas ahaanna waa 10% tirada shacabka dalkaas. Qaar kamid ah Muslimiintaas ayaa ku eedeeyay Macron inuu cadaawad u hayo diintooda
Xiisadda labada waddan ayaa meel adag gaartay, waxaana Turkiga uu taageeray in la qaadaco alaabaha Faransiiska lagu sameeyo, arintaasi oo ka billaabatay qeybo ka mid ah Bariga Dhexe.
Previous articleWasiirka arrimaha gudaha oo qado sharaf u sameeyay saraakiisha Booliiska+sawirro.
Next articleMadaxweyne Waare oo soo magacaabay xubnihii federaalka ee doorashooyinka.